अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा बिक्की गुरुङको लाईभ प्रस्तुती – osnepal tv
चर्चित गायक बिक्की गुरुङले अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा लाईभ कन्सर्ट गर्ने भएका छन् । कमेरो ईभेन्ट्सको आयोजनामा कुशल व्यवस्थापक बिक्रम गुरुङको नेतृत्वमा आउदो माग १० गते अर्थात जनवरी २४ मा अष्ट्रेलियाको सिड्नी स्थित सार्क होटलमा उनले सांगितिक प्रस्तुती दिनेछन् ।
बिक्कीले यसअघि पनि बिक्रम गुरुङ्को नेतृत्वका केही कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुती दिनेछन् ।
सार्क होटलमा आयोजना हुने यो कार्यक्रममा दर्शकहरुको उल्लेखनिय उपस्थिती रहने बिश्वास लिईएको छ । आयोजक टिम कार्यक्रमलाई भब्यताका साथ सम्पन्न गर्न लागिपरिरहेको व्यवस्थापक बिक्रमले जानकारी दिएका छन् । युवापुस्ताको मनामा बस्न सफल गुरुङ्को मरी जाउ, केवल, मरी जाउ २ लगायतका गीत चर्चित छन् ।
Previous article रहेनन् गायक निशान भट्टराई, आफैंले चलाएको कारले ज्या*न लियो !
Next article नेपालगञ्ज विमानस्थलको निर्माणकार्य तीव्र
रहेनन् गायक निशान भट्टराई, आफैंले चलाएको कारले ज्या*न लियो !
नेपालगञ्ज विमानस्थलको निर्माणकार्य तीव्र